Patent cusub ayaa ka caawin kara Siri inuu ku daydo codka codkeena | Waxaan ka socdaa mac
Qeyb cusub oo ay soo gudbisay Apple, calaamado ayaa la muujiyay oo umuuqda inay muujinayaan nidaamka codeynta, taas oo Siri waxay la jaan qaadi kartaa "codkeeda" si ay ugu habboonaato midabka mid adeegsadaha adeegsado. Sidan oo kale, haddii aan ku suganahay meel deggan, Siri lama maqli doono codka caadiga ah, laakiin wuxuu la qabsan lahaa muggiisa iyadoo loo eegayo xaaladaha dibadda.
Sidaan ognahay, Apple waxay si hagar la'aan ah u raadisaa hab ay adeegsadayaashu u adeegsadaan awooda buuxda ee ay bixiyaan aaladaha sumadda. Hal-abuurnimadan cusub waxay u oggolaaneysaa inay ka faa'iideysato astaamaha xaalado badan oo badan taasi waxay na siineysaa inaan leenahay caawiye gacmeed gacanta si aan u ogaano cimilada, ama xitaa u wacno qof ama lacag ugu dir xiriir gaar ah.
Patent-kan, oo hadda kahor la diiwaangeliyey, ma laha taariikh fulin gaar ah, laakiin rajada ugu badan ayaa fileysa muuqaalkan cusub ee Siri ee sanadkan 2018, labadaba qalabka macruufka iyo dhammaan kombiyuutarada Mac-64.
Marka loo eego buuqa deegaanka ee aan ku dhex jirno hadba xaaladaha jira, Siri waxay wax ka beddeli lahayd garoonkeeda, iyadoo la qabsanaysa xaaladda. Apple waxay ku dooneysaa tan in dadka isticmaala ay isticmaalaan Siri in ka badan inta aan hadda isticmaalno.
Marar badan, waxaan isku aragnaa inaanan adeegsan karin Siri si looga fogaado soo jiidashada dareenka ama xanaaqa, laakiin shatigan cusub waxaa la doonayaa in "wada hadalka" aan la yeelano kaaliyahayaga suugaanta ah noqo sida ugu dhow ee suurtogalka ah.
Sida laga soo xigtay khubarada qaar, Siri wuxuu diyaar u noqon lahaa inuu xitaa kaga jawaabo xiiqda, oo midba midka kale ku fahmo isku mid, wax aan xilligan la malayn karin, maaddaama kaaliyaha u baahan yahay mug cayiman si uu noo fahmo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Patent cusub ayaa ka caawin kara Siri inuu la mid noqdo codka codkeena